मेरो श्रीमान् म महिनावारी भएको बेला से’क्स गर्न खोज्नुहुन्छ, गर्न हुन्छ कि हुदैन या गर्दा के हुन्छ ? – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > मेरो श्रीमान् म महिनावारी भएको बेला से’क्स गर्न खोज्नुहुन्छ, गर्न हुन्छ कि हुदैन या गर्दा के हुन्छ ?
मेरो श्रीमान् म महिनावारी भएको बेला सेक्स गर्न खोज्नुहुन्छ । यस्तो बेलामा छुनु हुन्न भन्ने हाम्रो परम्परा छ । उहाँ भने ‘केही हुँदैन, झन् रमाइलो हुन्छ’ भन्नुहुन्छ । महिनावारीमा सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यसले महिलालाई शारीरिक हानि त हुने होइन ? सी